Uhlu lwefeksi lwabathengi baseNdiya | Uhlu Lokukhangisa Ngefeksi | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwefeksi lwabathengi baseNdiya
Amanani wefeksi yabathengi baseNdiya
I-Fax Marketing ingenye yezindlela ezingabizi kakhulu futhi eziqondile zokuthuthukisa imikhiqizo noma izinsiza zakho. Ukuqokwa Kwamahhala Kwamuva kunikeza Uhlu Lwamafeksi lwakamuva lwaseNdiya lokusiza abathengisi ukusebenzisa izinto zakamuva kwezobuchwepheshe ukukhulisa i-ROI kusuka emikhankasweni yokusakaza ifeksi ngobuningi. Isigcini sefeksi singakusiza ukukhiqiza amakhasimende amasha ebhizinisi lakho ngemikhankaso yethu yokuqhumisa ifeksi.
Sebenzisa imikhankaso yethu yokuqhuma kwe-fax ukuthumela izincwadi zezindaba zenkampani, ama-memos kumakhasimende noma abaphakeli noma ukuthola izinkomba ezintsha zebhizinisi. Le nsizakalo ihlose kakhulu emabhizinisini njengoba abantu bavikelekile ngaphansi komthetho futhi akufanele bathole amafeksi okuthengisa nokumaketha ngaphandle kokuthi banikeze imvume yangaphambilini.
Thenga i-India B2C Izinhlu zeFekisi
Inani Lamarekhodi: 5000
INDIA ISIQINISEKISO SOKUFUNDA I-INDIA
Uhlu lwefeksi lwabathengi laseNdiya luhlinzeka ngemali engabizi, esebenzayo futhi engabizi kakhulu yezinombolo zefeksi zabathengi. Ukuqinisekisa uhlu lwezinombolo zefekisi eziseqophelweni eliphezulu kuthathwe kumthombo othembekile neziza zekhambi lebhizinisi elifuna uhlu lwenombolo yefeksi efanelekile kuwo wonke amathemba abhekiswe kuwo.
Idatha yokuthumela ngeposi yakamuva noma i-latestdatabase.com iyinkampani enganikeza insizakalo ethembeke kakhulu, kufanele uhlanganyele lapho okwenziwa wedwa ukuletha izinombolo zefeksi zangempela nezicacisiwe. Uhlu lwefeksi lwabathengi laseNdiya luhlu lwamafeksi olusha kakhulu nolusebenzayo kunabo bonke abanye abahlinzeki bohlu.
Uhla lwefeksi lwabathengi baseNdiya oluvela kuDatha Yokugcina Yamahhala noma i-latestdatabase.com ifaka okulandelayo:
Ama-5,000 ayi-data evuselelekile aqoqwe avela emthonjeni wabathengi abahlukahlukene
Ukukunikeza intengo efanelekile efinyelela ku- $ 1,050
Indawo efanelekile yohlu lwabathengi baseNdiya, imininingwane eyiqiniso kunazo zonke yokuqedela izidingo zakho maqondana nohlu lwezinombolo zefeksi olusiza kakhulu ukukhulisa inhloso yakho yokuthengisa ngefeksi.
India Uhlu lwabathengi Fax Uhlu & Impendulo